ကျွန်တော် မောက်ကို နှိပ်လိုက်တိုင်း Pointer ရဲ. နောက်မှာ ကြယ်ပုံလေးတွေ ပေါ်လာမဲ. ဆော.၀ဲလ်လေး တင်ပေးချင်ပါတယ်။ ဆော.၀ဲ်လေးတွေစမ်းချင်တဲ. သူတွေအတွက် Pointer နောက်မှာ ပုံလေးနဲ.ဆို မျက်စိ အမြင်မှာ လှတာပေါ.ဗျာ။
Filed under software Tagged with Desktop Fun
Website များနှင်. မိတ်ဆက်ခြင်း
ကျွန်တော. ဘလော. လေးကို လာလည်တဲ. စာဖတ်သူအပေါင်း အကျိုး၇ှိစေမည်. software website တစ်ခု အကြောင်းလေး ပြောပြချင်တယ်ဗျာ။
hwww.filehippo.com မှာ ၇ှိတဲ. ဆော.၀ဲလ်တွေအားလုံးက free ပေးတာပါ။ update လည်းဖြစ်ပါတယ်
ဘယ်ဆော.၀ဲတွေက ဘယ် version အထိေ၇ာက်နေပြီလဲ (ဥပမာ-firefox)။
ကိုလိုချင်တဲ.ဆော.၀ဲလ်တွေ လိုက်၇ှာနေစ၇ာ မလိုတော.ဘူးပေါ.။ ဆော.၀ဲလ်တစ်ခု
ဒေါင်းတော.မယ်ဆို၇င် ကိုယ်လိုချင်တဲ.ေ ဆာ.၀ဲလ်ပေါ်မှာ နှိပ်ပြီး ဒေါင်းလိုက်ပါ။
ဘေးက Download Latest Version နှိပ်ပြီး၇င် စဒေါင်းလို.၇ပါပြီ။
(မြန်မာ ၀က်ဆိုဒ်လိပ်စာများ လိုတယ်ဆို၇င် မေးချန်ခဲ.ပေးပါ။)
Filed under software Tagged with internet
ကွန်ပျူတာကနေ မှားဖျက်မိတာတွေ ပြန်ယူမယ်
ကျွန်တော်တို. ကွန်ပျူတာကနေ မှားဖျက်မိတဲ. ဖိုင်တွေ ၊ ဓာတ်ပုံတွေ ကို
အလွယ်တကူ ပြန်ယူလို. ၇တဲ. ဆော.၀ဲလေးပါ
mediafire ကနေ ဒေါင်းမယ်။
ziddu ကနေ ဒေါင်းမယ်။
Filed under software Tagged with Recover
ကိုယ်ဖတ်နေတဲ. website စာမျက်နှာကို pdf အဖြစ်ပြောင်းပြီး သိမ်းမယ်
ကျွန်တော်တို. စိတ်0င်စားတဲ. ၀က်ဆိုဒ်လေးတွေ ၊ကိုယ်ဖတ်နေတဲ. ၀က်ဆိုဒ်လေးတွေ
ကိုယ်လိုချင်တဲ.စာလေးတွေကို pdf ဖိုင်ပြောင်းပြီး သိမ်းကြမယ်ဗျာ ဒီဆော.၀ဲလ်လေးက
word ကနေ pdf လဲပြောင်းလို.၇တယ်ဗျ အောက်ကလင်.လေးနှိပ်ပြီးဒေါင်းပေးပါ